musha 9 Products 9 Soterre
Yakareruka vhezheni kutonga uye kutumirwa kweQlik. Kuuya nekukurumidza kuTableau uye PowerBI.
Motio inounza makore edu eruzivo mukugadzirisa uye otomatiki BI kune nyika yeQlik Sense. Qlik Sense inoshaya kutonga kweshanduro uye ine dambudziko nzira dzekutumira. Isu tinoita kuti iyi puratifomu ine simba ive yakakura nekubvisa marwadzo ayo. Tiri munzira, yedu chaiyo vhezheni uye shanduko yekutevera inopa granular ruzivo kugadzirisa zvaunoda kuongorora.
Demystify shanduko mune yako Analytics Implementation
Bhizinesi rako harimbomira, uyezve analytics yako haimire. Iwe unofanirwa kuve nekutonga uye kugona kuongorora kweakanakisa maitiro, kunyanya kune ako ekuzvishandira-mashandisiro kesi. Maturusi edu anokutendera kuti utarise zvese zvinoitwa neshanduko uye nekuchengetedza nharaunda ine hutano uye ine hutano.
Shanduro Kudzora inopa:
ZZero Kubata Shanduro Kudzora
ZKutsvaga uye Kuongorora
Bvisa iyo Hassle kubva kuDhipatimendi
Deredza nguva, simba, njodzi, uye huwandu hwevanhu vanobatanidzwa nekutumirwa kwako. Chishandiso chedu chinokutendera kuti ubatanidze nharaunda dzakawanda uye nekuchengetedza zvakachengeteka zvirimo pakati pavo. Kubvisa kudiwa kwe server kuwana yekufambisa mafaera kunopa timu yako nekwanisi yekukanda-imwechete deployments.
Isu tinoita deployments:
ZYakachengeteka uye Yakavimbika